समाचार – NepalNewsTv | The Daily Star of Nepal
प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसलामाथि फिल्मकर्मी दीपकराज गिरीले टिप्पणी गरेका छन् । उनले फेसबुक स्टाटसमार्फत् लेखेका छन्, ‘यो जित कस्को ? यो हार कस्को ? यसरी सोच्ने बुद्धि कसैमा पनि…
काठमाडौं । सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले सिधा कुरा … लिएर आउने भएका छन् । मंगलबार राजधानीमा नयाँ टेलिभिजन च्यानल‘ ग्यालेक्सी ४ के’ सार्वजनिक गर्दै लामिछानेले नयाँ कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।…
काठमाडौं । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा र प्रधानन्यान्याधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराबीच सर्वोच्च अदालतमा भेटघाट भएको छ। प्रधानसेनापति थापा राणालाई भेट्न सोमबार दिउँसो आफै सर्वोच्च पुगेका हुन्। नेपाली सेनाले भेटघाट भएको पुष्टि…
काठमाडौं, ५ माघ । डिजेल र पेट्रोलका कारण प्रदूषणको मात्रा बढ्दै गएका समाचार यति बेला नौला रहेनन् । प्रदूषण नियन्त्रण गर्न भनेर विकसित मुलुकले वैकल्पिक उपायबारे खोजअनुसन्धान गरिरहेका छन् । जापान, कोरिया,…
गोरखाको शहीद लखन गाउँपालिकास्थित मनकामनामा अवस्थित प्रसिद्ध धार्मिकस्थल मनकामना मन्दिर दर्शन गर्न आउने दर्शनार्थीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । कोरोना भाइरसका कारण नौ महिना बन्द भई गत मङ्सिर २८ गतेदेखि…
काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीले प्रतिस्थापन गर्दै लैजाने नीति लिएको भए पनि चालू आर्थिक वर्ष (आव) को पहिलो ५ महीनामा विद्युतीय सवारीसाधनको आयात ८८ प्रतिशतले घटेको…
कास्कीको पोखरास्थित फिस्टेल अस्पतालमा एकजना कोरोना संक्रमित महिलाको मृत्यु भएको छ ।पोखरा महानगरपालिका-२ की ५८ वर्षीया महिलाको उपचारको क्रममा बिहीबार बिहान ७:३५ बजे मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ । गण्डकी…
काठमाडौं उपत्यकामा विभिन्न स्थानहरुमा सडक बढाउने क्रममा घरमाथि डोजर चल्न थालेपछि केही व्यक्तिहरु प्रश्न गर्न थालेका छन् । सडकले घर मिच्यो कि घरले सडक मिच्यो । पीडित व्यक्तिहरुका अनुसार उनीहरुको…
उखु किसानलाई एक महिनाभित्र बक्यौता भुक्तानी गर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उखु किसानलाई एक महिनाभित्र भुक्तानी दिन सरकारको नाममा आदेश गरेको छ। न्यायाधीश कुमार रेग्मीकाे एकल ईजलाशले यस्ताे आदेश गरेको हो । काठमाडौंसम्म भुक्तानी प्राप्तिका लागि वर्षैपिच्छे…
चीनमा पनि भेटियो कोरोना भाइरसको नयाँ प्रकार !
काठमाडौं । चीनमा पनि कोरोना भाइरसको नयाँ संक्रमित भेटिएको छ । कोरोना भाइरसको सुरुवात एक वर्ष अगाडी चीनबाट नै भएको थियो । चीनबाट नै विश्वभर कोरोना फैलिएको हो । तर…